Posted by Tranquillus | Jul 11, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny loharanon'olombelona sy ny fahafantarany dia miovaova amin'ny orinasa iray mankany amin'ny orinasa iray hafa. Raha tsy notanterahina ireo filàna ireo dia mety hipoitra ao anaty orinasa ny bottlenec amin'ny fampandrosoana maharitra na maharitra. Noho izany ny ilana manomboka manomboka fiofanana-asa fiofanana na koa famerenam-bola. Fanavaozana ao amin'ny Reconversion na fampiroboroboana ny fianarana asa (Pro-A). Fitaovana iray ahafahanao manatsara ny asanao. Anjaranao ny manao ezaka hampiseho ny fahavononanao hampiofana. Kely ny fotoana hisafidianana anao amin'ny kisendrasendra.
Fantaro ny fisintonana indray na fampiroboroboana amin'ny fifandimbiasana
Fomba iray hanavaozana ny rohy malemy na toerana misy ireo toerana lehibe eo amin'ny dingan'ny fampandrosoana. Raha atao amin'ny teny hafa, ny orinasa rehetra dia tsy maintsy manova ny tenany mba hahafahana mameno ny fitakiana maro napetraky ny teknolojia, marketing ary mpanjifa.
Manana tombotsoana amin'ny fikarakarana ny mpiasany daholo ny orinasa tsirairay amin'izany.
Ny fampivoarana ny asa na ny fampiroboroboana ny fianarana dia manampy ny orinasa amin'ny fampifanarahana ny tarika famokarana amin'izay mety ho olana. Amin'ny lafiny iray, Pro-A dia fitaovana mahasoa ho an'ny mpandraharaha mitady fahaiza-manao vaovao.
Amin'ny lafiny iray, miantoka ny matihanina miasa amin'ny mpiasa izay mandray soa avy amin'izany. Izany dia mamela ny hanao asa matihanina vaovao amin'ny alàlan'ny tetikasa tetezamita matihanina. Ho hitan'ny mpiasa any ny fanamboarana matihanina mahasoa amin'ny asany sy ny ho aviny matihanina.
Amin'izany fomba izany, raha vantany vao vita ny fiofanana na ny fotoam-panovana dia mahazo fampiroboroboana ara-tsosialy na matihanina ny mpiasa. Ary tratra ny tanjona faratampony: ny hahomby amin'ny tetik'asa fampandrosoana ao anatin'ny orinasa ary hampitombo ny famokarana ao anatin'ny fotoana maharitra.
HAMAKY Inona no maha samy hafa ny karama net sy ny karama fototra?
Iza ny mombamomba matihanina no afaka miditra amin'ny fampiroboroboana ny fianarana momba ny asa?
Ny mpirotsaka hofidina dia tokony ho ao anatin'ny fifanarahana CDI. Araka ny lahatsoratra L. 5134-19 sy ny fanarahana ny kaody momba ny asa, ireo izay nanao sonia ny fifanarahana fampiraisana tokana na CUI dia afaka manaraka ity fiofanana ity ihany koa. Ny mpiasa maniry ny hampisondrotra ny toeran'ny Pro-A. Tokony hanana ambaratonga ambany amin'ny fanabeazana noho ny mari-pahaizana licence.
Ny mpiasa izay manao ny ampahany amin'ny asany taorian'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana ny fitantanana dia afaka manolotra ny fahazoan-dàlana ho fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fanoloana. Ny atleta na mpanazatra matihanina amin'ny fifanarahana CDD dia afaka miatrika an'io fampiroboroboana io. Amin'ny ankapobeny dia mpiasa manana mari-pahaizana ireo ambany noho ny fenitra takian'ny fampandrosoana ara-teknolojia.
Noho izany, ireo ekipa mpanatanteraka orinasa dia hamela azy ireo amin'ny alàlan'ny Pro-A. Fifanarahana amin'ny fanovana mitranga ao amin'ny orinasa. Rehefa tapitra ny hetsika fanazaran-tena dia hahazo mari-pahaizana tsara kokoa. Io dia hahafahan'izy ireo miditra amin'ny fampiroboroboana na toerana mety hitranga.
Inona no karazana fampiofanana mandritra ny Pro-A?
Ny mpiasa voafidy amin'ity fiofanana ity dia hanaraka ny taranja matihanina sy teknolojia amin'ny teoria izay tsy maintsy hataon'izy ireo any aoriana. Miankina amin'ny fepetra takiana, hatao ny atrikasa manaraka ny fepetra azo ampiharina. Noho izany, ireo mpianatra ao anatin'ny rafitry ny Pro-A dia afaka mahazo ny fanasokajiana iray izay eken'ny fifanarahana iraisan'ny sampana.
Ireo mpiasa mpianatra ireo dia manararaotra ny internship sy ny fotoana hafa hirotsaka an-tsitrapo amin'ny asa teknika na manokana. Rehefa tapitra ny fiofanana Pro-A, dia hahazo tombony amin'ny Validation ofiquence traikefa (VAE) izy ireo. Izy ireo dia hipetraka ao amin'ny RNCP (National Directory of Professional Certification).
HAMAKY Hetra ho an'ny vahiny any Frantsa
Eny tokoa, nanomboka ny 23 Aogositra 2019 rehefa ampiharina ny ôrdônansy n ° 2019-861, dia afaka mahazo tombony amin'ny fahaizana matihanina ny olona iray noho ny Pro-A. Ity dia mari-pahaizana tafiditra ao amin'ny lisitry ny sampana matihanina. Pro-A dia azovolavolaina noho ny fisian'ny teknika efa tonta sy ny fanovana lehibe eo amin'ny sampana matihanina.
Ahoana ny fomba fiofanana mifototra amin'ny asa?
Ny fiofanana dia azo atao mandritra ny ora fiasana. Karama isam-bolana ny mpiasa noho izany. Mpiasa efa za-draharaha kokoa, notendren'ny mpitantana orinasa, no mitana ny andraikiny amin'ny maha mpampianatra azy ary noho izany dia manome fiofanana momba ny fianarana-asa hanaovana izany. Ny fampianarana, ao anatin'ny Pro-A, dia maharitra 6 volana ka hatramin'ny 12 volana (na 150 ora farafahakeliny).
Ny mpampianatra dia handray sy hitarika ny mpiasa mandritra ny fampiofanana na fampiofanana nataony. Anjaranao mpampianatra ity no mandahatra ny fandaharam-potoanany sy ny asany mba hampianarana ny teknika tadiavina rehetra. Ity mpampianatra ity ihany dia handray anjara amin'ny dingana farany amin'ny fanarahana ny fiofanana: ny fanombatombanana.
Ny Pro-A dia afaka mandeha ivelan'ny ora fiasana. Tsy misy ny fiofanana omena mpahazo tombontsoa amin'ity raharaha ity. Ny ora fiasana dia mety ho voatokana manontolo na amin'ny ampahany amin'ny fotoam-piofanana. Ny mpampiasa sy ny mpiasa voakasika dia tsy maintsy manapa-kevitra, aorian'ny famoronana ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny fikarakarana ny mpanazatra.
Mandritra io vanim-potoana io, ny fifanarahana momba ny asa ananan'ny mpiasa dia hisy fanitsiana. Na izany aza, izy manohy ny tombontsoa rehetra mifandraika amin'ny Social Security na ny orinasa fiantohana ara-pahasalamana momba ny asa. Ohatra, mety nahitana valim-pananana sy fanohanana izy raha misy ny aretina.
HAMAKY Ireo fombafomba mifandraika amin'ny fiara sy ny fahazoan-dalana mitondra any Frantsa
Avy aiza ny famatsiam-bola ho an'ny Pro-A?
Ny fiofanana amin'ny fianarana asa dia midika hoe fanekena asa matihanina. Ny mpiasa afaka miditra amin'ny fiofanana mifandraika amin'ny asa dia tsy takiana handoa na inona na inona. Fa kosa ny Competence Operator (OPCO) na ny orinasam-pifandraisana (raha toa ianao ka manana serivisy fanofanana) izay mamatsy ny zava-drehetra.
Ity dia tahan'ny fisaka izay manarona ny vidin'ny fiofanana, ny fampiantranoana ary ny fitaterana ho an'ny mpiasa mianatra. Ny tahan'ny fisaka voatanisa dia 9,15 euro isan'ora amin'ny toerana misy anao araka ny didim-panjakana. Na izany aza, ny sampana tompon'andraikitra amin'ny fiofanana dia mety hanome onitra tsara kokoa.
Ny tambin-karama ataon'ny mpiasa amin'ny fanazaran-tena dia azo antoka avy amin'ny Competence Operator raha toa ka ny sampana matihanina no nanangana azy io mialoha. Ny mpandraharaha dia afaka mandoa koa ny serivisy rehetra an'ny mpampianatra hampianarina.
Azony raisina ny vidiny mifandraika amin'ny fampiharana ny serivisy tutorial mandritra ny rafitry ny Pro-A. Izy io dia ampahany amin'ny vola natokana ho an'ny fanazaran-tena Pro-A ho an'ny fitantanana orinasa iraisana izay ahafahana mamerina ireo mpiasa nisolo toerana sy ireo mpampianatra ireo notendrena hanao famerenam-bidy na Pro-A. Fotoana iray tsy hisehoanao ity.
Fanavaozana ny Reconversion na fampiroboroboana ny fianarana momba ny asa (Pro-A). Jolay 8th, 2020Tranquillus
Teo alohaNy drafi-pivoarana momba ny fahaiza-manao. Ny hetsika fampiofanana mpampiasa ho an'ny mpiasa.
manarakaNy kaonty fampiofanana manokana (CPF)